Verbatim ToughMAX USB Flash Drive 32GB (Black) ~ ICT.com.mm
HomeVerbatim ToughMAX USB Flash Drive 32GB (Black)
Verbatim မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အကြမ်းခံ၊ ရေစိုခံ ToughMAX USB Flash Drive 32GB (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင် ၅,၀၀၀ အထိ အလေးချိန်ဖိအားဒဏ်ကို ခံနိုင်သလို ရေအနက် ၁၀၀ ပေ အထိ ရေစိုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အတွက် ဒေတာတွေကို ပျောက်ဆုံးပျက်ဆီးမှာ လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အကြမ်းခံနိုင်ဖို့အတွက် USB Drive ရဲ့ကိုယ်ထည်ကို KyronMAX™ ဆိုတဲ့... [Learn more]
Verbatim မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အကြမ်းခံ၊ ရေစိုခံ ToughMAX USB Flash Drive 32GB (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင် ၅,၀၀၀ အထိ အလေးချိန်ဖိအားဒဏ်ကို ခံနိုင်သလို ရေအနက် ၁၀၀ ပေ အထိ ရေစိုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အတွက် ဒေတာတွေကို ပျောက်ဆုံးပျက်ဆီးမှာ လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အကြမ်းခံနိုင်ဖို့အတွက် USB Drive ရဲ့ကိုယ်ထည်ကို KyronMAX™ ဆိုတဲ့ နည်းပညာမြင့် တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ပလတ်စတစ်သားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပါးလွှာပြီး စတိုင်ကျတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး မိမိရဲ့အရေးကြီးလှတဲ့ ဒေတာတွေကို Password နဲ့ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ Windows စနစ်မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Password Protection Software ကို Download ရယူပြီး တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Extremely durable – the ultimate in data protection , Crush resistant up to 5,000 lbs, Water resistant up to 100 ft., Temperature resistant from -13ºF to 300ºF, Made from proprietary KyronMAX™ material – revolutionary, high-strength plastic, Slim, stylish design – perfect for on-the-go use , Password protection software available for download, 66057
Able to withstand up to 5,000 lbs* of force!
Able to withstand extreme temperatures, ranging from -13ºF to 300ºF*!
Able to withstand up to 100 ft.* of water!